'IT: Isi nke Abụọ' gụnyere Iconic Adrian Mellon Scene, na-akwado onye edemede
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ 'IT: Isi nke Abụọ' Na-agụnye Iconic Adrian Mellon Scene, na-akwado onye edemede
'IT: Isi nke Abụọ' Na-agụnye Iconic Adrian Mellon Scene, na-akwado onye edemede
by Michael anamusọ eto Nwere ike 13, 2019
by Michael anamusọ eto Nwere ike 13, 2019 1,199 echiche
Dị ka nnukwu onye na-akwado akwụkwọ akụkọ Stephen King IT, ọ na-apụta ngwa ngwa na anyị agaghị enweta mmegharị kwesịrị ntụkwasị obi. Ma ndị minista ọrụ 1990 na onye nduzi ihe nkiri 2017 Andy Muschietti wepụrụ akwụkwọ ahụ n'ọtụtụ ụzọ, na IT: Isi nke abuo anya setịpụrụ ime otu ihe ahụ.
Ewezuga eziokwu ahụ na enwere ihe ole na ole m achọghị ịhụ ka emegharịrị, maka ebumnuche doro anya, abịara m kwenye n'eziokwu ahụ na enweghị mgbanwe ga-ejide akwụkwọ King n'ụzọ zuru ezu. N'ikwu eziokwu, enwere ike nke ahụ kacha mma, ebe ọ bụ na anyị agụkarịala akụkọ ahụ.
Ekele ohuru THR nyochaa IT: Isi nke abuo screenwriter Gary Dauberman ezie, anyị nwere ike zuru ike mfe maara na ọ dịkarịa ala otu ọzọ iconic usoro ga-eme na-abịa ihe nkiri. Dauberman kwenyere na igbu ọchụ Adrian Mellon ga-emezigharị.
“Ọ bụ ihe ngosi akara ngosi n’akwụkwọ ahụ na nke anyị chọrọ itinye na fim ahụ. Ọ bụ ọgụ mbụ na Derry nke oge a ma setịpụ ihe Derry ghọrọ. Ọ bụ mmetụta nke Pennywise ọbụlagodi mgbe ọ na-ezumike ụra, na ọ bụ ihe ọjọọ dị njọ na-eme Adrian. Ndị ọchọ okwu a na-arụ ọrụ site na Pennywise dị mkpa ka anyị gosi. ”
Maka mmadụ ole na ole na-agụtụbeghị IT, Adrian Mellon bụ nwoke nwere mmasị nwoke na onye ya na Don nọ mgbe ndị otu egwu homophobic wakporo ya. A tụbara Mellon n'elu akwa mmiri ma kụọ aka na-amaghị onwe ya, mgbe ahụ Pennywise na-eche ka ọ gwụchara n'ụzọ egwu.
Ndị ọrụ minista nke 1990 elegharaghị ihe nkiri a anya, agbanyeghị na ọ ga-adị mma, ihe nkiri abụọ a jikọtara nwere ihe dị ka elekere atọ karịa nke oge iji rụọ ọrụ. Olileanya Dauberman, Muschietti, na ndị ọrụ ya na-eme nke a ikpe ziri ezi dị oke egwu ma na-emenye ụjọ.